Mariro 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jehovha anotsamwira Jerusarema
Hapana kunzwirwa tsitsi (2)
Jehovha aita semuvengi kwariri (5)
Kuchema Ziyoni (11-13)
Vanhu vanopfuura vachishora guta raimbova nerunako (15)
Vavengi vanofarira kuparara kweZiyoni (17)
א [Aleph] 2 Inga Jehovha afukidza mwanasikana weZiyoni negore rekutsamwa kwake! Akanda runako rwaIsraeri panyika achirubvisa kudenga.+ Haana kuyeuka chitsiko chetsoka dzake+ pazuva rekutsamwa kwake. ב [Beth] 2 Jehovha amedza nzvimbo dzese dzekugara dzaJakobho asina tsitsi. Aparadza nhare* dzemwanasikana weJudha akashatirwa kwazvo.+ Awondomora uye asvibisa umambo+ nemachinda ahwo.+ ג [Gimel] 3 Agura simba* rese raIsraeri akatsamwa kwazvo. Akabvisa ruoko rwake rwerudyi pakauya muvengi,+Uye akaramba achipfuta pakati paJakobho semoto, akaparadza zvese zvakapoteredza.+ ד [Daleth] 4 Akombamisa* uta hwake semuvengi; ruoko rwake rwerudyi rwagadzirira semhandu;+Akaramba achiuraya vaya vese vanoyevedza.+ Uye akadururira kutsamwa kwake mutende remwanasikana weZiyoni semoto.+ ה [He] 5 Jehovha aita semuvengi;+Amedza Israeri. Amedza shongwe dzese dzeZiyoni;Aparadza nhare dzaro dzese. Anoita kuti kuchema nekushungurudzika zviwande mumwanasikana weJudha. ו [Waw] 6 Anorwisa dumba rake+ sekaimba kari mumunda. Agumisa* mutambo wake.+ Jehovha aita kuti mutambo nesabata zvikanganwike muZiyoni,Uye kutsamwa kwake kunotyisa kwaita kuti asaremekedza mambo nemupristi.+ ז [Zayin] 7 Jehovha arasa atari yake;Azvidza nzvimbo yake tsvene.+ Aisa masvingo eshongwe dzaro dzakavakwa zvakasimba muruoko rwemuvengi.+ Vakwidza manzwi avo vari muimba yaJehovha,+ sepazuva remutambo. ח [Heth] 8 Jehovha asarudza kuti achatoparadza rusvingo rwemwanasikana weZiyoni.+ Atambanudza tambo yekuyeresa.+ Haana kudzosa ruoko rwake kuti rurege kuparadza.* Uye anoita kuti rusvingo nemurwi wekudzivirira nawo zvicheme. Zvese hazvisisina kusimba. ט [Teth] 9 Magedhi aro anyura pasi.+ Aparadza uye apwanya mazariro* aro. Mambo waro nemachinda aro vari pakati pemarudzi.+ Hapana mutemo;* kunyange vaprofita varo hapana zvavari kuratidzwa naJehovha.+ י [Yod] 10 Vakuru vemwanasikana weZiyoni vagara pasi vakanyarara.+ Vanoisa guruva mumisoro yavo uye vanopfeka masaga.+ Mhandara dzeJerusarema dzakotamisa misoro pasi. כ [Kaph] 11 Maziso angu aneta nekuchema misodzi.+ Mudumbu mangu hamuna* kugadzikana. Chiropa changu chadururirwa pasi, nemhaka yekuwa kwaita mwanasikana* wevanhu vangu,+Nemhaka yekuziya kuri kuita vana nevacheche mumisika yeguta.+ ל [Lamed] 12 Vanoramba vachibvunza vanaamai vavo vachiti, “Zvirimwa newaini zviripi?”+ Pavanoziya mumisika yeguta semunhu akuvadzwa,Pavanenge vava kufa* vari mumaoko avanaamai vavo. מ [Mem] 13 Chii chandingashandisa sechapupu,Kana kuti ndingakufananidza nei, haiwa iwe mwanasikana weJerusarema? Ndingakuenzanisa nei kuti ndikunyaradze, haiwa iwe mhandara yeZiyoni? Nekuti kuparara kwako kukuru segungwa.+ Ndiani angakuporesa?+ נ [Nun] 14 Zviratidzo zvakaonekwa nevaprofita vako zvaiva zvenhema uye zvakanga zvisina zvazvinobatsira,+Uye havana kubudisa pachena kukanganisa kwako kuti urege kutapwa,+Asi vakaramba vachiona zviratidzo zvenhema uye zvinotsausa vachikuudza.+ ס [Samekh] 15 Vese vanopfuura nemugwagwa vanokurovera maoko zvekutsvinya.+ Vanoridza muridzo vachishamisika+ uye vanodzungudzira mwanasikana weJerusarema misoro, vachiti: “Ndiro here guta riya ravaiti nezvaro, ‘Rizere nerunako, mufaro wenyika yese’?”+ פ [Pe] 16 Vavengi vako vese vakakushamira miromo yavo. Vanoridza muridzo uye vanorumanisa mazino avo vachiti: “Tamumedza.+ Iri ndiro zuva ratanga takamirira!+ Rasvika, uye tariona!”+ ע [Ayin] 17 Jehovha aita zvaaida;+ azadzisa zvaakataura,+Zvaakarayira kare kare.+ Aputsa asinganzwi tsitsi.+ Aita kuti muvengi afare nezvaitika kwauri; akwidziridza simba* remhandu dzako. צ [Tsade] 18 Mwoyo yavo inochema kuna Jehovha, haiwa iwe rusvingo rwemwanasikana weZiyoni. Misodzi ngaiyerere serukova siku nesikati. Usazorora, ziso rako* ngarirege kuzorora. ק [Qoph] 19 Muka! Shevedzera usiku panotanga nguva dzekurinda. Durura mwoyo wako pamberi pechiso chaJehovha semvura. Musimudzire maoko ako kuitira upenyu hwevana* vakoVari kuziya nenzara pamakona ese emigwagwa.+ ר [Resh] 20 Tarisai muone haiwa Jehovha uya wamakarwadzisa chaizvo. Vakadzi vanofanira kuramba vachidya vana vavo+ vavakabereka, ivo vana vavo vakanyatsosvika* here,Kana kuti vapristi nevaprofita vanofanira kuurayirwa munzvimbo tsvene yaJehovha here?+ ש [Shin] 21 Mukomana mudiki nemurume akwegura vakati rabada vakafa mumigwagwa.+ Mhandara dzangu nemajaya angu vaurayiwa nebakatwa.+ Makauraya pazuva rekutsamwa kwenyu; makauraya zvisina tsitsi.+ ת [Taw] 22 Munounganidza zvinhu zvinotyisa kubva kumativi ese sekunge kuti izuva remutambo.+ Pazuva rekutsamwa kwaJehovha hapana akapukunyuka kana akapona;+Muvengi wangu akaparadza vaya vandakabereka* ndikarera.+
^ ChiHeb., “Atsika.”
^ Kana kuti “Aparadza.”
^ ChiHeb., “kumedza.”
^ ChiHeb., “Ura hwangu hahuna.”
^ Uku kudetemba uchitaura chimwe chinhu seuri kureva munhu, zvichida pachiratidza kunzwira tsitsi kana kuti tsiye nyoro.
^ Kana kuti “mweya wavo paunenge wava kupera.”
^ ChiHeb., “mwanasikana weziso rako.”
^ Kana kuti “mweya yevana.”
^ Kana kuti “izvo zvibereko zvavo zvakanyatsosvika.”
^ Kana kuti “vandakabereka vaine utano.”